Waxaan u dagaalamaynaa Cadaalada Deegaanka & Caafimaadka - El Centro de la Raza
Waxaan u Dagaalannaa Cadaaladda Deegaanka & Caafimaadka
Abaabulka iyo U -doodista Xalinta Beacon Hill Hawada & Saamaynta Saamaynta Caafimaadka
Nagu soo biir | Nalasoo | Saamaynta Caafimaadka
Beacon Hill waa 6 mayl dheer oo ku dhawaad ​​2 mayl. Waxaan nahay xaafad nugul oo laga tirada badan yahay. Waxaa nagu hareereysan wadooyin waaweyn Diyaaraduhu waxay nagu duulaan 90-kii ilbiriqsi kasta celcelis ahaan 70-90 decibels, waxay si fiican uga sarreeyaan 55 decibels maalintii iyo 45 habeenkii. Wasakhowga hawadu waxay saamaysaa caafimaadka neef-mareenka, sanqadhana waxay saamaysaa heerarka walbahaarka, hurdadeena, caafimaadka wadnaha iyo waxbarashada. Laakiin, waxaanu nahay bulsho "xayndaab toosan" sababtoo ah dariiqyada duulimaadku waa kuwo go'an, waxaana helnaa 70% diyaaradda ku soo degta SeaTac.
Waxaa intaa dheer, SeaTac waxay qorsheyneysaa inay dejiso labanlaabidda duullimaadyada caalamiga ah, saddex laab xamuulka hawada iyo kordhinta 47 illaa 66 milyan oo rakaab ah SAMP (Qorshaha Madaarka Joogtada ah). Waan siinnay gelitaanka baaxadda ee EIS (bayaanka saameynta deegaanka). EIS wuxuu soo bixi doonaa dayrta 2020 waana inaan diyaar u nahay inaan ka jawaabno.
Maxaad qaban kartaa? Iskaa wax u qabso, Nagu soo biir.
Shaqadeenna waxaa haga hagooggeenna hoose Qorshaha Waxqabadka Bulshada. Nagala soo qaybgal fulinta 8 -da shey ee wax -qabad ee ay ku taliyeen 467 xubnood ee jaaliyaddayadu. Sannadkan, waxaan abaabulnaa si aan u gudubno HB 1847 Yaraynta Sawaxanka Diyaaradda oo ay ku jirto Beacon Hill. Kani waa tallaalkayagii ugu fiicnaa ilaa hadda. Waxaan sidoo kale la shaqeyneynaa Wakiilka Mareykanka Adam Smith si aan dib ugu soo bandhigno Bulshooyinka Diyaaraddu Saamaysay biilka.
Khariidadda Buuqa Xaafadda
2017 Maalinta Dhulka Blue Sky Trails: Video / Data / Photos
Khariidadda Buuqa ee Degaanka
Cleveland HS Daraasadda Buuqa
Maalinta Dhulka 2022 Charla!
Qof kasta oo seegay Dhacdadayada Maalinta Dhulka, fadlan ku raaxayso Soo dhawaaw duubis! Haddii ay jirtay bandhig gaar ah oo aad rajaynaysay, halkan waxa ah stamps-ka wakhtiga bandhig kasta:
Isbaheysiga Gegida Caalamiga ah ee Degmada King: 9:45
Ololaha SAMP, Kristina Chu: 19:07
Wasakhowga diyaaradda & caafimaadkeena: Dr. Kris Johnson: 23:00
Sida loogala hadlo Dhalinyarada Cimilada iyo Wasakhowga, Qoysaska Waxqabadka Cimilada; Daaweeye, Megan Slade; EJ Baraha & Abaabulaha Maritza Lauriano Ortega: 1:01:09
Hadalka kama dambaysta ah: 1:19:00
Wixii su'aalo ah fadlan la xiriir Iskuduwaha Cadaalada Deegaanka, Maria Batayola: mbjumpstart@msn.com iyo/ama Baraha & Abaabulaha Cadaalada Deegaanka, Maritza Lauriano mlortega@elcentrodelaraza.org
QORSHAHA WAXQABADKA BULSHADA
Sannadkii 2017, ECDLR iyo EPA waxay gaareen 467 xubnood oo ka tirsan bulshada waxayna qabteen 24 kulan oo ku kala baxay 6 luqadood (Shiine, Ingiriis, Soomaali, Isbaanish, Tagalog iyo Fiyatnaamiis). Waxaan wadaagnay macluumaad ku saabsan hawada Beacon Hill iyo wasakhowga buuqa iyo saameynta caafimaadka. Waxaan waydiinay bulshadeena maxaan ka qaban karnaa. Natiijadu waxay tahay Beacon Hill Air iyo Saamaynta Caafimaadka Saameynta Bulshada Qorshaha Waxqabadka (CAP) ee haga shaqadeena maanta. Eeg annaga 2017-2018 El Centro EPA Report Project.
1. Waxbaridda & Awood siinta Bulshada
Waxaan soo saarnay “Sidaad isaga ilaalin lahayd Hawada & Sawaxanka Wasaqda” qoraal ku qoran Shiine, Ingiriis, Isbaanish, Tagalog, iyo Fiyatnaamiis ” si aad u isticmaasho oo aad ula wadaagto macluumaadka munaasabadaha kala duwan ee bulshada.
2. Dhis Awood Ay Shaqada Ku Qabato
Shaqadeena waxaa inta badan awood siiya mutadawiciin iyo qaar ka mid ah deeqaha. Waxaan leenahay xulafada EJ dhammaan qeybaha oo dhan laga bilaabo ururada hoose ilaa ururada caafimaadka maxaliga ah ilaa jaamacadaha. Awoodda dadku waa matoorkeena ugu fiican.
Waxaan sidoo kale ku guuleysanay inaan deeq ka helno EPA (2017-2018 deeqda Iskaashiga Xallinta Dhibaatada), Deeqda Aasaaska Caafimaadka Kooxda (2018), iyo Magaalada Seattle (2019 iyo 2020). Waxaan sidoo kale u doodnay maalgelinta 2019 UW Daraasadda Hawada & Sawaxanka.
3. Cabir Hawada & Sawaxanka Wasaqda
Sannadkii 2018, El Centro iyo EPA waxay siiyeen 3 Deeqo Awood -siinta Bulshada dadaallada saynisyahannada beesha Beacon Hill. Natiijooyinka waxaa lagu diiwaangeliyaa foomka 2018 Saamaynta Caafimaadka Hawada & Saamaynta Warbixinta Waxqabadka Mashruuca. Eeg bogagga: 14 illaa 15 mashruuca Beacon Arts Blue Sky Trails; Cleveland HS Noise Study pages bogagga 16-38 ee mashruuca Naadiga Naadiga Cleveland HS oo ay falanqaysay Machadka WWU Huxley Dr. Troy Abel; iyo bogagga 39-61 ee loogu talagalay warbixinta Mashruuca Cabbiraadda Biyaha ee Beacon Hill iyo falanqaynteedii hore cusbooneysiiyay. Natiijooyinka UW Tirakoobka Hawada & Sawaxanka waxaa lagu wadaagi doonaa 2-29-20 Xarunta Dhaqanka Centilia.
4. Ujeeddada Maalgelinta Dhimista
Waxaan leenahay 3 siyaabood oo siyaasad ah si aan u noqonno kuwa u qalma yaraynta:
1. Abaabul caawimaad si aad uga gudubto Washington HB1847 sanadkaan.
2. Sii wad wadashaqaynta Aadam Smith oo ka tirsan Congress -ka Maraykanka si dib loogu soo celiyo Hindise Sharciyeedka Beelaha ee Saameeyay Diyaaradda.
3. La shaqee helitaanka Dekedda Seattle si si siman loo yareeyo buuqa iyo yareynta barnaamijyada. Kaalay nagu soo biir dadaalladan.
5. Beddel Jidadka Hawada, “Sii Beacon Hill Ridef Relief
Tani waa mid adag. Waxaan maanka ku hayn doonnaa markaan ka bilowno helitaanka xaaladda yareynta Beacon Hill iyo ka ilaalinta waxyaabaha inay ka sii daraan.
6. Beer Geedo Badan
Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo geedahayaga hadda jira marka lagu daro beeritaanka kuwo cusub maxaa yeelay geeduhu waa shaandheeyeyaal hawo oo xooggan waxayna kaydiyaan kaarboon. Waxaan iskaashi la sameyneynaa Golaha Beacon Hill si:
1. Caawi si aad uga gudubto Xeerka Geedka Seattle oo xoog badan oo ay diyaariyeen Guddiga Dhirta Magaalooyinka.
2. Inventory oo sawiro annaga geedo aan caadi ahayn oo ku yaal Beacon Hill oo leh Amnesty Plant.
7. Kor u qaadista Gaadiidka Beddelka ah
Kudos oo ku socota Degmada King si ay uga go'an tahay inay dhammaan basaska u beddelaan koronto. Waxaan la shaqeyneynaa Golaha Beacon Hill si aan u helno saldhigyo badan oo lacag -bixin ah dhammaan xaafaddayada baabuurta korantada ah iyo taageeridda Beacon Hill Safe Streets waxay aqoonsadaan hagaajinta iyo adeegyada dhexdhexaadka Beacon Hill ee Columbia ilaa dhammaadka Beacon Hill si badbaado leh oo ay u adeegsadaan dadka lugeeya, baaskiiladaha iyo dadka isticmaala kursiga curyaanka.
8. Ka yaree Heerarka Buuqa Ilaha kale